Wasaaradaha internetka - Silbano Garcia, II.
Calaamadaha Silbano Garcia, II.
Silbano Garcia, II. waxay u adeegtaa sida wacdiye u ah kaniisadaha Masiixa, waana aasaasaha wasaaradaha Internetka. Munaasabada 1, 1995, waxa uu ahaa qalab loogu talagalay in la geeyo Internetka ugu horeeya ee Internetka ee kaniisadaha Masiixa ee dunida oo dhan loo yaqaan Kaniisad-of-Christ.org. Rabbigu wuxuu isaga u adeegsaday shan ururro, oo wuxuu ku dhex baabtiisay naftayada 1,527 ee jidhka Ciise Masiix. Ilaahay oo keliya ayaa ogyahay tirada dadka naftiisa ku yimid Masiixa iyada oo loo marayo daraasadaheena casriga ah ee online-ka ah iyo nalakaaga oo loo marayo Wasaaradaha Internetka. Brother Garcia ayaa loo yaqaan 'Evangelist' iyo 'Pioneer' oo ku yaala barashada internetka. Waxa uu ahaa qalab lagu caawinayo boqollaal jameeco ah isticmaalka internetka isagoo ah gaari lagu faafinayo Injiilka Ciise Masiix.
Brother Garcia waa Masiixi ah xamaasad leh oo ka shaqeeya wacdinta iyo bandhigyada. Habka wanaagsan ee uu uugu yeerayo Wanaajinta Dunida waa faafin, waxaana kugu dhiirigelin doona addoonkan Masiixa. Ilaahay ayaa u barakeeyey Brother Garcia iyadoo hadiyad ahaan loogu guuleysto oo ku aaddan jidhka Ciise Masiix. Waxa uu u safray qaybo badan oo adduunka ah si uu ugu dhiirrigeliyo Injiilka Masiixiga iyo Wanaajinta Dunida kaniisadaha. Brother Garcia waxay sii wadi doontaa inay u adeegto sidii wacdiye kaas oo danaynaya oo kaliya waa in la dhiso jidhka Ciise Masiix oo ah Rabbigeenna iyo Badbaadiyeheenna.
Ku kalsoonow Rabbiga!
Haddii aadan arki karin warbaahinta kor ku xusan - ka soo qaado halkan: MP3
Wakhtigu waa yimid
Xoog yeelo Rabbiga!